Dana Us: + 86-532-86198899
Kuumbwa Machine / Core Shooter Machine
QSC90 Stone Texturing bara nenyunje Machines
QBT Tubing kupomba Sub pena nenyunje Machines
QH69 H Beam And H-Chikamu Steel Profile bara Blastin ...
Q48 (Q58) Pendant Chain / Chain chitakuriso paunenge mhando (s ...
FD Series compressed mhepo yokunatswa pamusoro guruva C ...
PPW dzino refu bhegi mhepo bhegi kupomba shure-inoyerera guruva ...
QH69 H Beam And H-Chikamu Steel Profile kupfurwa nenyunje And Cleaning Machines
QH69 akatevedzana chinotenderera tafura kuburikidza mhando simbi mamiriro akapfura nenyunje muchina rokuchenesa muchini H simbi mamiriro, zvakanaka chose yakatarwa imwe mhando akapfura nenyunje rokuchenesa midziyo imba yakanaka, chiine chimiro, pasi ruzha, ushamwari zvakatipoteredza, zvakanaka kuita. It ainyanya kushandiswa ngura nadzo, deburring, kuchenesa, uye mukati kushushikana nokubvisa, pose nokusimbaradza chiedza, inorema H simbi, simbi mamiriro zvinoriumba, uye ndiro nhengo. Characters pamusoro muchina ichi: ☆ The pamusoro murindi ndiro uye ...
Supply Mano: 10000 Sets per year
QH69 akatevedzana chinotenderera tafura kuburikidza mhando simbi mamiriro akapfura nenyunje muchina rokuchenesa muchini H simbi mamiriro, zvakanaka chose yakatarwa imwe mhando akapfura nenyunje rokuchenesa midziyo imba yakanaka, chiine chimiro, pasi ruzha, ushamwari zvakatipoteredza, zvakanaka kuita. It ainyanya kushandiswa ngura nadzo, deburring, kuchenesa, uye mukati kushushikana nokubvisa, pose nokusimbaradza chiedza, inorema H simbi, simbi mamiriro zvinoriumba, uye ndiro nhengo.
Characters pamusoro muchina ichi:
☆ The pamusoro murindi ndiro uye divi murindi bwendefa bara blaster nemaonero chaiyo yakarongeka, izvo inovandudzika zvikuru kusakara nemishonga uye upenyu basa wavarindi ndiro.
☆ The runodzivirira bwendefa bara nenyunje Kamuri iri harikunguruswi Mn13 unodzivirira mundiro uye mukuru-manganese simbi yairema pamwe zvazvinoita nemishonga uye yakakwirira vapfeke nemishonga, uye yakaiswa Dzokuvaka.
☆ The Kuparadzana mudziyo adopts akura zvakazara keteni keteni keteni mhando gang separator, uye kuparadzana kunyatsoshanda anogona kusvika 99.9%.
☆ Workpiece kuonekwa mudziyo anogona zvinobudirira kudzora yokutanga uye kumisa nguva bara blaster, kudzivisa zvazvinoreva isina bara nenyunje kuti bara blaster, kunze simba uye kuvandudza upenyu basa vanotambura zvikamu zvakadai yomukati murindi ndiro uye bara blaster.
☆ muchina uyu ane mashandiro anoita otomatiki mhosva kuonekwa, nokutya, kunonoka otomatiki vanorega pashure aramu.
☆ The guruva kubviswa hurongwa adopts yakakwirira kunyatsoshanda Sefa katuriji guruva nemuteresi. Guruva achine idukusa 100 MG / m3 uye 5 MG / m3 mumusangano, iyo inovandudzika zvikuru kushanda kwezvakatipoteredza vashandi.
☆ A sandara geji iri yakarongwa piritsi Hopper pamusoro separator, uye ane otomatiki piritsi dzichifura mudziyo hwakarongwa pajinga kuguma erevheta.
☆ The shanduka Frequency stepless kukurumidza mutemo wenyika workpiece irikupa yose hurongwa.
☆ Full-mutsetse PLC programmable controller inoshandiswa kuziva otomatiki kuonekwa, otomatiki kutsvaka uye ruzha uye chiedza aramu.
☆ The midziyo iri tsindirana, kuti marongerwo anonzwisisa, uye kugadzira zvinhu zviri nyore chaizvo.
Makirogiramu / Maminitsi
Previous: QXY Steel Plate Pretreatment Line pamwe Pre-kudziyisa rikavapo Painting uye Kuomesa
Next: Q35 Michina Table bara nenyunje Machines
Bogie bara nenyunje Machine
Multi Table pena nenyunje Machines
Michina Belt bara nenyunje Machines
Michina Drum pena nenyunje Machine
Michina Drum Type pena nenyunje Machine
Rotating Table pena nenyunje Machine
Kuzvibaya nenyunje Machine In Railway
Kuzvibaya nenyunje Machine Table Type
Akapfura nenyunje Machines For Metal
Swing Table pena nenyunje Machines
Table Tyoe bara nenyunje Machine
Turbine pena nenyunje Machine
Used Michina Table pena nenyunje Machine
Z145WA / B Microseism manikidzira richigadzirisa Machine
ZC akatevedzana bhegi mhando guruva nomuteresi
Coiled Wire bara nenyunje Machines
Q35 Michina Table bara nenyunje Machines
Q38 panhongonya Rail pena nenyunje Machine With Ha ...
S33 akatevedzana Eddy ano regenerator
Rubatsiro rwedu? Tumirai zvokubvunza zvenyu